Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Iinkampani zefanitshala
Izixhobo zaseKhitshini | Izixhobo zombane | Umboneleli wezixhobo zegumbi lokuhlambela | Isono ...
I-OneSgBath i-decor yekhaya ekhokelayo ibonelela izixhobo zekhitshi, izixhobo zombane, izinto zokuhlamba eS Singaporehttp: //www.onesgbath.com/
umbono Iinkampani zefanitshala ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
Khetha udidiindawo yokuhlala Amagumbi aqeshwayoBusiness Directory Ababoneleli beenkonzo zeMali Abahambisi bokuPhucula iKhaya Iinkampani zefanitshala
Furniture kubhekiswa kwizinto ezinokususwa ezenzelwe ukuxhasa imisebenzi eyahlukeneyo yabantu njengokuhlala (umzekelo, izitulo, izitulo, kunye nesofa), ukutya (iitafile) kunye nokulala (umzekelo, iibhedi). Ifenitshala iphinda isetyenziselwe ukubamba izinto kwindawo efanelekileyo yokusebenza (njengendawo ethe tyaba ngaphezulu komhlaba, njengeetafile kunye needesika), okanye ukugcina izinto (umzekelo, iikhabhathi zekhabhathi kunye neishelufu). Ifenitshala ingaba yimveliso yoyilo kwaye ithathwa njengendlela yobugcisa bokuhombisa. Ukongeza kwindima yokusebenza kwefanitshala, inokusebenzela injongo yokomfuziselo okanye yenkolo. Ingenziwa kwizinto ezininzi, kubandakanya isinyithi, ipulasitiki kunye neenkuni. Ifenitshala inokwenziwa kusetyenziswa iindibaniselwano zomsebenzi wokhuni ezibonisa inkcubeko yalapha.
ISingapore ((mamela)), ngokusemthethweni iRiphabhlikhi yaseSingapore (iMalawi: iRubub Singapura; isiTshayina: 新加坡 共和国; IsiTamil: சிங்கப்பூூ ்் குய ுச))), sisixeko-siqithi sesixeko saseMazantsi mpuma Asia. Ilele kwisidanga esinye (i-137 yeekhilomitha okanye i-85 yeekhilomitha) emantla eikhweyitha, kwincam esemazantsi penesi yeMalay, kunye neRiau Islands yaseIndonesia emazantsi kunye nePeninsular Malaysia emantla. Umda weSingapore unesiqithi esinye esikhulu kunye ne-62 ezinye iziqithi. Ukusukela kwinkululeko, ukuphinda kukhululwe umhlaba kwandise ubungakanani bayo nge-23% (iikhilomitha ezi-130 zeekhilomitha okanye i-50 yeekhilomitha). Eli lizwe laziwa ngotshintsho olwenziwayo ukusuka ekuphuhlisweni ukuya kwisimo esihlumayo kwisizukulwana esinye phantsi kolawulo lomseki waso uLee Kuan Yew.In 1819, uSir Stamford Raffles waseka ikoloniyali yaseSwitzerland njengesikhundla sokurhweba kwiNkampani yeBritish East India. Emva kokuwa kwenkampani kwi-1858, iziqithi zagalelwa iBritish Raj njengekholoni yesithsaba. Ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi, iSwitzerland yayithathwe yiJapan. Ifumene inkululeko kuBukhosi baseBritane kwi1963 ngokujoyina iMalawi kunye neminye imimandla yangaphambili yaseBritane (Sabah kunye neSarawak), kodwa yahlukana emva kweminyaka emibini ngenxa yokwahluka kwengqondo, yaba lilizwe elizimeleyo kwi1965. Emva kweminyaka yamandulo yokuphazamiseka kwaye ngaphandle kokunqongophala kwezinto zendalo kunye ne-hinterland, isizwe siphuhlise ngokukhawuleza njengoqoqosho lwe-Tiger yase-Asiya, esekwe kurhwebo lwangaphandle kunye nabasebenzi. I-Singapore yindawo yemfundo yehlabathi, ezolonwabo, ezemali, ezempilo, ezemali, ukuvelisa izinto, ukuvelisa, itekhnoloji, ukhenketho, urhwebo kunye nezothutho. Isixeko sikumgangatho ophezulu kakhulu kwizikhundla ezininzi zamazwe ngamazwe, kwaye samkelwe njengelona lizwe "lilungele ubuchwepheshe" (I-WEF), isixeko esikhulu seentlanganiso zamazwe aphesheya (UIA), isixeko esinezona ndawo zibalulekileyo zotyalo-mali (i-BERI), esona sixeko silumkileyo emhlabeni. elona lizwe likhuselekileyo lelona lizwe, ukhuphiswano loqoqosho oluhamba phambili kwihlabathi, ilizwe lesithathu elonakeleyo, othengiso lwesithathu ngobukhulu, iziko lesithathu ngobukhulu bezemali, indawo yesithathu yokucoca ioyile kunye neziko lezorhwebo, ilizwe lesihlanu elivelisayo, kunye nezibuko lesibini elixakekileyo . I-Economist ibeke indawo yaseSwitzerland njengeyona dolophu ibiza imali enkulu ukuhlala kuyo, kuba i-2013. Ichongwa njengendawo yentengiso. I-Singapore kuphela kwelizwe e-Asiya enomgangatho we-AAA wobukhosi obuvela kuzo zonke iiarhente ezinkulu zokulinganisa, kunye nenye ye-11 kwihlabathi liphela. Emhlabeni wonke, iPort of Singapore kunye ne-Changi Airport zibambe izihloko zokukhokela "i-Maritime Capital" kunye "nesikhululo senqwelomoya" ngokulandelanayo iminyaka elandelanayo, ngelixa i-Singapore Airlines yi-2018 "yeyona Nqwelomoya yeSikhululo seNqwelo moya". I-Singapore ibala i-9th kwi-UN Human Development Index ene-3rd ephezulu ye-GDP kwi-capita. Ibekwe kakhulu kwizalathiso eziphambili zentlalo: imfundo, ukhathalelo lwempilo, ukulindelwa kobomi, umgangatho wobomi, ukhuseleko lomntu nezindlu. Nangona ukungalingani komvuzo kuphezulu, i-90% yamakhaya ahlala abantu. Ngokwe-Democracy Index, eli lizwe lichazwa njenge "demokrasi engenasiphene". Isixeko-ikhaya silikhaya kubahlali abazizigidi ze-5.6, i-39% yabo ngabemi bamanye amazwe, kubandakanya abahlali abasisigxina. Kukho iilwimi ezine ezisemthethweni: isiNgesi, isiMalay, isiMandarin nesiTshayina; Uninzi lwabemi baseSingapore ziziilwimi ezibini kwaye isiNgesi sikhonza njengolwimi lwesizwe, ngelixa isiMalayari lulwimi lwesizwe. Ukwahluka kwawo ngokwenkcubeko kubonakaliswa kukutya okubanzi kohlanga kunye nemikhosi emikhulu. Uphando lwePew lufumanise ukuba iSpanish yeyona nto iphambili kunayo nayiphi na inkolo. I-Multiracialism ibekwe kumgaqo-siseko ukusukela kwinkululeko, kwaye iyaqhubeka nokubumba imigaqo-nkqubo kazwelonke kwimfundo, kwezindlu, kwezopolitiko, phakathi kwezinye. ISpanish yiriphabliki ebumbeneyo enenkqubo e-Westminster yorhulumente wepalamente ongenabumbano. I-People's Party Party iphumelele lonke unyulo kususela ekuzimele-gekweni ukuqala kwe-1959. Njengomnye wamalungu amahlanu asekekileyo e-ASEAN, eSwitzerland ngusokhaya we-Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Oonobhala Bezomthetho kunye ne-PECC) yooNobhala, kunye neenkomfa ezininzi kunye nemisitho. Ikwalilungu leNgqungquthela ye-East Asia, ukungahambelani kunye neZizwe eziManyeneyo.
zonke iindidiindawo yokuhlalaBusiness Directory